Nichlos Kay oo la kulmay Barre Hiiraale – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Danjiraha Qaramada Midoobay u qaabilsan arimaha dalka Soomaaliya Nichlos Kay iyo haweenayda kuxigeenka u ah Fathia Serrour, ayaa shalay kulan waxa ay Magaalada Muqdisho kula qaateen Barre Aadan Shire (Barre Hiiraale) oo dhawaan lasoo gaarsiiyay Magaalada Muqdisho.
Waa kulankii ugu horeeyay oo dhexmaray Nichlos Kay iyo Col. Barre Hiiraale, waxaana looga wada hadlay arimaha ku aadan Jubbooyinka iyo ka qeybqaadashada nabadda Jubbooyinka.
Nichlos Kay, ayaa ku ammaanay Barre Hiiraale sida uu u aqbalay door ka qaadashada nabadda Jubbooyinka iyo ka qeybgalka shirka arimaha Jubbooyinka looga hadlaayo oo Bishan gudaheeda ka dhacaayo Magaalada Kismaayo.
Danjire Kay ayaa sheegay inay muhiim tahay xal uhelida mushkiladaha ka taagan Jubbooyinka si loo soo afmeero khilaafka ragaadiyay hanaanka nabadda iyo dib udhiska Gobalada Jubbooyinka.
Kulanka oo ka dhacay Xarunta Amisom ee Xalane, ayaa waxaa sidoo kale ka dhexmuuqday xubno ka tirsan taageerayaasha Barre Hiiraale oo dhankooda goobjoog ahaa shirka.
Barre Hiiraale ayaa tilmaamay inay muhiim tahay in lagawada qeyb qaato nabadda Gobalada Jubbooyinka, taasina ay tahay masuuliyad saaran qof waliba oo Soomaali ah.
Wafdi ka socda dowladda Soomaaliya iyo IGAD oo dhawaan tegay Kismaayo ayaa dhawaan Barre Hiiraale ku qanciyey inuu kazoo tago deegaanka Goobweyn, islamarkaana uu yimaado Kismaayo, waxaana loo soo gudbiyey Muqdisho.
Barre ayaa Hiiraale ayaa sidoo kale aqbalay inuu ka qeyb qaato arrimaha nabadeynta Jubooyinka, halkaasoo horay looga dhisay maamulka Juba ee Axmed Madoobe hogaamiyo, kaasoo Barre la dagaallamay.